Umgangatho ophezulu woDoli oNcancisayo kwi-Urdolls
Iidoli ezinkulu zesondo ze-boob ziyathengiswa
Ngaba uyafuna ukuba unodoli omkhulu webele? Usenexhala lokungafumani unodoli wakho omkhulu osebeleni. Nantsi isiseko soonodoli abancancisayo be-Urdoll. Zonke izibini zamabele amakhulu zizele kwaye ukubamba kuyinyani kwaye kunokwanelisa zonke iingcamango zakho. Oonodoli baseJapan ibele elikhulu linokwenziwa lolomntu ngeendlela ezahlukeneyo, Oonodoli bezesondo abanamabele amakhulu bahambelana ngokugqibeleleyo kwabo bafuna ukufumana okwaneleyo kwento entle.
Abahle beKrisimesi abaDala ngobuhle uVanessa Amabele Amakhulu Imilenze yabantu abadala Iqumrhu labantu abadala i-TPE yeDoll
I-Sexy Big Chest Sex Doll Series
Amabele amakhulu amabele anesondo athengiswayo
Ngaba uphuphe uphupha intombazana enomtsalane kakhulu kwaye Uphulula amabele akhe amakhulu? Ukuba uthanda, ungafumana ibele elikhulu oonodoli bothando ufuna apha. aba nodoli banezifuba ezinkulu, isifuba esigcweleyo nesithambileyo, sikunika isifuba sokwenene. Oonodoli abakhulu bebele obunokwenyani banokuzalisekisa umnqweno wakho wokufunxa.Kumadoda amaninzi, kunye nabasetyhini abathile, akukho mda kubungakanani kunye nomtsalane. amabele amakhulu Unodoli wamabele amakhulu ungcono, kwaye unodoli wesondo wamabele amakhulu ungcono nangakumbi.A unodoli wamabele amakhulu ingqokelela emangalisayo ye unodoli wokwenene enamabele aqinileyo, aqinileyo nangqukuva! Bonke oonodoli abakhulu bezesondo benziwe nge-TPE yenqanaba lezonyango / imathiriyeli yeSilicone kunye namathambo entsimbi ahlala eqinile, aqhume kakhulu. I-TPE sex doll ube nolusu olunenyani kakhulu kunye nomzimba obhetyebhetye ukuhlangabezana noninzi lweengcinga zakho zesini.
Yintoni eyenza ukuba iiBoobs ezinkulu kuNodoli weSini zizive ziyinyani?
Ukuba uyawathanda amabhongo amakhulu, ubukhulu becala, ngcono ayiyontetho nje — yindlela yokuphila. Oonodoli bethu abakhulu bezesondo bayinto yokwenyani kuba unodoli omkhulu wesondo owenziwe ngenyani. Iidoli zesini esityebileyo kunye nezinye izinto ezifana nobomi.Sivakalelwa kukuba ukukhwelana phakathi kwabantu abadala kuvuya kakhulu, kwaye amabele amakhulu anodoli wesifuba esikhulu esifana nobomi ngamava esondo anxilisayo. Inyani yethu amabele amakhulu oonodoli besini uya kuhlangabezana nephupha lakho kunye nephupha labasetyhini abanomdla kakhulu abangafumanekiyo ebomini bokwenyani, kwaye unokuzama ukudibana kwebele ngokumangalisayo ngoncedo lwamabele abo amakhulu angamanyala.